मेयर पदको उम्मेदवारीका लागि वी.पी. काे जागिर छाेड्दै सुजेन्द्र तामाङ - Purbeli News
मेयर पदको उम्मेदवारीका लागि वी.पी. काे जागिर छाेड्दै सुजेन्द्र तामाङ
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २९, २०७६ समय: १३:५०:२२
धरान / धरानस्थित वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारी सुजेन्द्र तामाङले मंसिर १४ गते हुने निर्वाचनमा मेयर पदको उम्मेदवारीका लागि तयारी गर्न तथा पूर्ण समय धरान र धरानवासीको सेवामा समर्पित हुन भन्दै जागिरवाट स्वेच्छिक अवकाश लिएका छन् । उनले प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति प्रा.डा. गुरुप्रसाद खनाललाई स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन बुझाएका छन् ।